FIFA oo xeerar cusub u sameeynaysa arrimo laga ”walaacsanaa” – Cayaaraha dunida
FIFA oo xeerar cusub u sameeynaysa arrimo laga ”walaacsanaa”
Madaxwaynaha FIFA ee Gianni Infantino ayaa doonaya inuu kacaamiyo xeerarka kubadda cagta, isagoo doonaya inuu meesha ka saaro suuq-jiilaalka bisha Jannaayo, inuu dhimo tirada laacibiinta la amaahan karo, isla markaana xad loo yeelo mushaharka la siiyo laacibiinta iyo baqshiishka wakiillada.
Sida ku dhigan warsidaha L’Equipe, Guddiga Joogtada ah ee FIFA ayaa 28-ka bishaan Febraayo ka doodi doona ajende ka kooban 11 qodob, kuwaasoo ay ugu horreeyaan qorshe lagu joojinayo suuqa Jannaayo si uusan kooxaha u mashquulin, kaasoo ah hindise ay keeneen kooxo ka dhisan EPL iyo Serie A qaarkood.
Arrin kale oo gaar ahaan dhibaato ku noqon doonta, Chelsea, Juventus iyo Udinese, oo ah naadiyada inta badan amaahda ku bixiya laacibiinta yar yar ee hibada kubadeed leh ayaa waxay tahay in la koobo tirada laacibiinta ay kooxi amaah ku dhiibi karto.
Waxaa sidoo kale la doonayaa in xeer laga soo saaro mushaharka ay laacibiintu qaataan oo faraha kasii baxaya kaasoo la doonayo in xad loo yeelo arrintan oo uu Infantino ku tilmaamay ”mid walaac leh” isagoo leh: ”Waa inaan ilaalinnaa waxyaabaha kubadda ka dhigay waxa ay tahay.”
Isla arrin taa u dhow waxaa la xadeeyn doonaa dallaalka la siiyo wakiillada iyo baqshiiska ama boqolleeyda ay kooxaha qaar u qoondeeyaan si uu iyaga ugu daneeyo.